विशुद्ध सौंदर्य समस्या र स्वास्थ्य मामलामा चिन्ता नगर्नुहोस् - कि कान मा एक डण्डीफोर धेरै विश्वास गर्छन्। हो, सबै को सबै भन्दा, यो छ तरिका - आउन र निकाय गम्भीर हानि कारण बिना जाने मुखासे, विशेष गरी युवा। तर, तैपनि, कान र कान पछाडि स्थलहरू सामान्यतः विश्वास छ भन्दा ठूलो खतरा।
आफ्नो कान मा मुखासे को कारण के हो? पहिले, स्वच्छता को अभाव। निस्सन्देह, कान - प्रत्येक भोजन आवश्यक छैन अघि आफ्नो हात, र तिनीहरूलाई धुन। तर यदि त्यहाँ कान मा एक स्थान थियो, यो कसैले नधोएका हातले चढ्नु छ भन्ने हो। र पनि खेलाडी हेडफोन को कान मा shoved वा छ भनेर हामीलाई wiping को अनुकूलन एक ह्यान्डसेटमा लागू गरियो। केही धेरै खराब बानी thoughtfully कान नङ, Toothpicks, पिन, र अन्य वस्तुहरू वरिपरि poking छ। कहिलेकाहीं दाना लामो-नधोएका बाल, धूलो, बालुवा झर्ने समुद्र तट मा एक परिणाम रूपमा कान देखिन्छ। धेरै संवेदनशील छाला भएका मानिसहरूले किनभने, वा किनभने बस ऊन वा फर टोपी को कस्मेटिक उत्पादनहरु को गरीब गुणवत्ता को कान पछि एक दाना जान सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, "संवेदनशील छाला को लागि" मेकअप खान बनाउन कि टोपी उनको घाँटी मा कान र छाला छुन छैन निश्चित गर्नुहोस्। यसलाई कडाई व्यक्तिगत स्वच्छता को नियम पालन गर्न आवश्यक छ, र मात्र होइन हात को सम्बन्ध छ: कान, को हैंडसेट हटाउन एक हप्ताको दुई पटक आफ्नो कपाल धुन एक कपास swab संग नियमित साफ गर्न आवश्यक छ।
कहिलेकाहीं कान मा एक डण्डीफोर एक चिसो को परिणाम हो। गर्मी मस्यौदाहरू खबरदार - तिनीहरूले केही अरू इनाम मुखासे मिठास छाला जस्तै हुन्। अवैतनिक देखि कान मुखासे जम्प मा चिसो मौसम मा bareheaded जाने। कान मा मुखासे जवान मान्छे को लागि एक वास्तविक महामारीले छन्। केवल अनुहार मा, कान, तर पनि - हर्मोन को एक वृद्धि मुखासे को उपस्थिति परिणामस्वरूप, सेता रक्तकोषहरू को अत्यधिक जारी, को वसामय ग्रंथिहरु को उद्घाटन को बढावा। यस मामला मा, केटाहरू र बालिका जवान छाला लागि विशेष कस्मेटिक्स प्रयोग गर्नुपर्छ, र सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा, एक डाक्टर, त्वचा विशेषज्ञ वा ब्यूटिशियन सल्लाह लिनुहोस्।
Catarrhal डण्डीफोर कान मा सजिलै लोक उपचार संग उपचार गर्न सकिन्छ। तपाईं घ्यु कुमारी को स्टेम कटौती र डण्डीफोर यसलाई लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं एक लोशन प्रयोग गर्न वा शोरबा सैलंडन वा plantain को रस को संकुचन गर्न सक्नुहुन्छ। पनि मुखासे लागि राम्रो Kalanchoe को कान मा मद्दत गर्छ। यो सफाइ फूल जीवाणुरोधी गुण छ रूपमा कान दाना, गरिब स्वच्छता कारण arising, राम्रो तरिकाले सफाया छन् chamomile फूल को decoction। नियम, यस्तो सरल पर्याप्त घर उपचार चाँडै सकारात्मक परिणाम दिन्छ।
को एक डण्डीफोर जब तर धेरै गम्भीर अवस्था छ कान दुख्छ। सायद, यो एक डण्डीफोर र जोश छ। कहिलेकाहीं कान बाट दुखाइ घाँटी, आँखा, चिबुक, दाँत चोट पठाउँछ। कहिलेकाहीं पनि कान स्पर्श पीडादायी, यो फैलएको, सुन्निएको हुन्छ, र एक व्यक्ति माथि 38 र माथि गर्न + एक ज्वरो हुन सक्छ। जोश कान नहर साँघुरो वा पूर्ण यो त व्यक्ति दुखेको कान भन्दा झन् खराब सुन्न सक्नुहुन्छ, वा पूर्ण सुन्न ब्लक।
के गराउँछ कान मा जोश? अक्सर एक कमजोर प्रतिरक्षा गर्न (नङ, पिन) पर्याप्त microtrauma omnipresent र सबै-pervading Aureus यसको विनाशकारी काम गर्न थाले। तर पनि कारण एक furuncle पुरानो रोग, भिटामिन कमी, hypothermia, पानी छप हर्मोन यौवन अवस्था रही हुन सक्छ।
के भने बस जस्तै कान मा एक डण्डीफोर थियो? टिप एक: तुरुन्तै चिकित्सा सल्लाह खोज्छौं। आत्म-दबाइ र थप स्वतन्त्र squeezing वा खोल्ने यस्तो रगत sepsis रूपमा जटिलताहरू संग furuncle fraught, बारम्बार उपस्थिति को फोडे, furunculosis रगत र उपस्थिति Carbuncles - जब साथ inflamed धेरै आसन्न बाल follicles। सुनिंनु को क्षेत्र एक चिया प्वाला को आकार पुग्न सक्छ र गहिरो क्युटेनियस ऊतक, कुरूप scars छोडेर असर गर्छ। बिना शीघ्र चिकित्सा ध्यान रोग को नतिजा घातक हुन सक्छ।
एक बच्चा मा मेरुदण्ड एक सङ्कुचन भंग: लक्षण, उपचार
गर्भावस्था मा homocysteine उच्च: यसको?
गाजर रोपण लागि उपकरण। को गाजर लागि सरल एकल-पङ्क्ति बागान
Glossalgia (भाषा विकार) - भाषामा एक दरार
जर्मनी: Koblenz र यसको इतिहास
चार्ल्स को Bald - सम्राट भए जो राजा
कविता विश्लेषण योजना (ग्रेड 9) साहित्य को लागि: उदाहरण